Uqhamuka kanjani nomcabango wohlobo lwebhizinisi ongaliqala?, kuloba uNtokozo Biyela | Umbele
Kuye kuthiwe ayikho indawo egcwele imicabango emihle nemibono yamabhizinisi amahle njengasemathuneni.
Namhlanje ngifuna ukusiza wena mfundi ukuthi ungabi ngomunye walabo bantu abagcwele emathuneni nemicabango emihle abangazange bayisebenzise ngenxa yokuba novalo lokuthatha isinyathelo sokuqala.
Ngaphambi kokuthi sijule, ake ngiqale ngokukubuza lo mbuzo othi: “Yini umcabango webhizinisi?” Njengoba sengike ngasho, wonke amabhizinisi aqala ewumcabango womuntu othile okungenzeka ukuthi kukhona into ayeloku eyibuka, ebona ukuthi ikhona indlela engcono le nto engenziwa ngayo.
Noma kukhona into eshodayo ndawana thize, uma ingaba khona, izinto zingenzeka kalula. Kokunye mhlawumbe kungenxa yamava omuntu azibona esenawo endimeni ethile.
Okukodwa kwaloku noma ingxubevange yakho konke yikona okwenza ukuthi abantu baqhamuke nohlobo oluhlukile lomcabango webhizinisi. Kwesinye isikhathi umcabango webhizinisi uye uqhamuke ngenxa yekhono umuntu analo.
Isibonelo nje, umuntu onekhono lokubhala, umuntu onesiphiwo sokubhaka, umuntu onekhono lokuba wusomahlaya. Uma ukuthatha konke loku futhi unakisisa, uzobona ukuthi kukhona abantu abanesidingo salezi zinto futhi bazimisele ukuzikhokhela.
Libe seliqala kanjalo-ke ibhizinisi. Kufanele kube nesidingo saleyo nto, bese wena uza nesisombululo.
Ngifisa sikesibheke lezi zinto ezilandelayo okufanele uzibuze zona kuqala ezenza umcabango webhizinisi lakho ube yimpumelelo noma ufadalale:
Iyiphi ingxenye ibhizinisi lakho elizoba nayo ukusombulula izidingo zabathengi?;
Hlobo luni lomkhiqizo noma usizo ozoludayisa?;
Uzokwenza kanjani ukuthi lo mkhiqizo wakho wenzeke noma ikhono lakho lifinyelele kubathengi?
Le mibuzo engenhla yimibuzo okumele uzibuze yona kuqala ngaphambi kokuthi uze uqale ungene ebhizinisini. Ngithanda sibuye sibheke ukuthi yini eyenza umqondo webhizinisi ohlabahlosile?
Kufanele umcabango webhizinisi lakho ube into efunwa abantu;
Kufanele umkhiqizo wakho noma ikhono lakho abantu bakwazi ukulikhokhela;
Kufanele ube nekhono noma amava ozokwazi ukuwasebenzisa ekwakheni leli bhizinisi lakho;
Kufanele ube nemali eyanele ukuthi ukwazi ukulisungula leli bhizinisi lakho. Uma kungenjalo, wazi ukuthi ungaluthola kuphi usizo lwezimali.
Abantu bayithola kanjani imiqondo esabalele nephusile yokuqala amabhizinisi? Ziningi izindlela zokuqhamuka nale miqondo, kuya ngokuthi uhlalaphi, uphila nobani, nikhulumani, ubukani, ufundani, abantu bafunani? Yini nethandwa ngabantu ngaleso sikhathi, yini into obona ukuthi eminyakeni ezayo izoba yisidingo esikhulu njll?
Uma usunqume ukuthi yiliphi ibhizinisi ozohambisana nalo, kunezinto okufanele uzibheke ezizokusiza ekucwaningeni ibhizinisi ozoliqala. Zine izinhlaka ezimqoka. Nazi:
Zihlole ukuthi amava akho noma ebhizinisi lakho aqine kuziphi izinhlaka;
Ikuphi lapho ubona khona ukuthi wena noma ibhizinisi lakho lintekenteke?;
Imaphi amathuba akhona wena noma ibhizinisi lakho elingawathola?;
Iziphi izinto ezingabeka ibhizinisi lakho engcupheni?;
Zozine lezi zinto zisemqoka ekuphumeleleni kwebhizinisi ofisa ukulisungula. Uma ungaziniki ithuba lokuzibhekisisa noma lokuzicubungula ngaphambi kokungena ebhizinisini, uyozithola uphambana nezimbila zithutha, ziholwa emhlophe phambili.
Ngakho-ke qaphela, zinike isikhathi wenze ucwaningo olunzulu ngaphambi kokuzibophezela ekuqaleni ibhizinisi ngoba yonke into oyenzayo nongayenzi ungazithola usuzifaka enkingeni zisuka nje amadaka.
Sengiphetha, kuhle kakhulu ukuthi uma unomcabango webhizinisi, uwukhulume nomuntu noma nabantu obathembayo emikhakheni wezamabhizinisi.
Kuhle kakhulu futhi nokuthi ubuze ongoti abasebenza ngezemikhakha yezamabhizinisi ngoba bona basuke benolwazi olunzulu ekusungulweni kwamabhizinisi.
Ngaleyo ndlela uze ungafani neningi elilele emathuneni nemicabango emihle ebingasiza umhlaba futhi ikwenzele izizumbulu zemali. Cabanga, wenze.